अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउन हुने टोपी दिवस मनाउन किन नहुने ? « Postpati – News For All
अंग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउन हुने टोपी दिवस मनाउन किन नहुने ?
संझना पौडेल । टोपी टाउको ढाक्नेगरी लगाउने कपडा वा टाउको पहिरन हो । यो शिर छोप्न, त्यसको शोभा बढाउन वा रक्षा गर्नाका निम्ति चाउलो टोपीको घेरामाथिको भाग वा चक्का र घेरा हाली सिइएको बस्त्र हो । टोपी पुरुषहरूले लगाउँछन् । नेपालीले प्राचिनकालदेखि टोपी लगाउने गरेको पाइन्छ ।